Halıcıoğlu'nda Metrobüs Metrobüse Çarptı,3Yaralı - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metrobus Metrobus Halıcıoğluများပြား,3ဒဏ်ရာရခဲ့
06 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metrobus, တူရကီ 0
Halicioglu အဆိုပါ metrobus metrobus ငါးကြင်းဒဏ်ရာရရှိ
Halıcıoğlu3ကလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ Mecidiyekoy Metrobus စျေးမှာရလဒ်များလမျးညှနျခတိုးတက် metrobus ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါမတော်တဆမှုအတွက် Beyoglu Halıcıoğlu Metrobus မှတ်တိုင်များတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သတင်းအချက်အလက်အရအစ္စတန်ဘူလ်, Avcılar Metrobus ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဦးတည် 9.45 နာရီအဖြစ်လက်ခံရရှိသည်ရပ်တန့် Metrobus ထိတ်လန့်ရလဒ်ချဉ်းကပ်လာသောအခါပြင်ပရှိစောင့်ဆိုင်း Halicioglu ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အကြီးအထိတ်တလန်ပျက်ကျမှုတွင်နေထိုင်သော Metrobus နိုင်ငံသားများပြီးနောက်ဖြစ်ရပ်စဉ်အတွင်း3လူများမတော်တဆမှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ အဲဒီအစားကျန်းမာရေးနှင့်ရဲအဖွဲ့များ၏မတော်တဆမှုများစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဒဏ်ရာရလူနာတင်ယာဉ်အားဖြင့်ဆေးရုံခဲ့ကြသည်။ မတော်တဆမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက် Metrobus ရိုက်နှက်သောသံတူသည်၏güğvenlခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ Metrobus လေ့လာရေးခရီးပုံမှန်ပြန်သွားကြ၏။
Halıcıoğluအတွက် Metrobus မတော်တဆမှု,2ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည် 19 / 04 / 2016 Halıcıoğluအတွက် Metrobus မတော်တဆမှု,2ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်: Halıcıoğluမတော်တဆမှုစေ metrobus သို့ခုန်တက်တဲ့သူ 1 လူတွေ။ အဆိုပါ metrobus သို့သွားလေ၏သူကိုHalıcıoğlu 1 လူများမတော်တဆမှုစေ၏။ ထိတ်လန့်စ Metrobus2ကလူစဉ်ဒဏ်ရာရရှိချွတ်သှားသောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်အတူပေါ့ပေါ့မတော်တဆမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ယာဉ်အတွက်တစ်ဦးကခရီးသည်။ အဆိုပါမတော်တဆမှုနိုင်ရန်အတွက်Halıcıoğlu 17.45 နာရီအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ မျက်မြင်သက်သေများအဆိုအရဆိုကြသည်နှင့် Metrobus ခရီးသည်, လမ်းရုတ်တရက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Metrobus Beylikdüzüဦးတည်ချက်ကနေHalıcıoğlu Zincirlikuyu ဦးတည်ချက်ကိုရပ်တန့်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်နိုင်ငံသားမှခုန်ချ။ Metrobus ဒရိုင်ဘာပေါ်မှာရုတ်တရက်ဘရိတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘရိတ်နေသော်လည်းဒဏ်ရာ Metrobus လူကူးထိမှန်စေ၏။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းMetrobüste ...
ယင်းမှ-do နယူးလူကူးမျဉ်းကြားဖို့Halıcıoğlu Metrobus ဘူတာ 18 / 03 / 2013 Halıcıoğlu Metrobus ဘူတာသစ်ကူးမျဉ်းကြားဆွဲဆောင်မှုများ: Halıcıoğluအတူအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်သို့သစ်တစ်ခုမြေပေါ်လူကူးတံတားလုပ်ဖို့ကျန်ရှိနေသေးသော D-100 အကြားSütlüceရပ်ကွက်အတွင်းကြေညာခဲ့သည်။ နယူးမြေပေါ်,3မသန်စွမ်းလူတို့အဘို့အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီဖြစ်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ Metrobus ဘူတာရုံမှခရီးသည်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေ access ကိုသစ်ကိုမြေပေါ်လူကူးတံတားစီမံကိန်းကိုထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီးခံခဲ့ရသည်ပေးလိမ့်မည်သည့် E-5 လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသောအကြားHalıcıoğluSütlüceရပ်ကွက်အတွင်း, နှင့်တကွ, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဖြင့်ကြေညာချက်အရသိရသည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသစ်ကိုမြေပေါ်လူကူးတံတားအကြောင်းကိုပေးတျောမူ၏ "Beyoğlu / နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်Halıcıoğluရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြေလျင်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ 1 လအတွင်းသစ်ကိုလူသွားလူများအတွက်ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့ ...
Metrobus Halıcıoğluလန်းဆန်းရပ်တန့် 14 / 03 / 2013 Metrobus မှတ်တိုင်များအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်သို့သစ်တစ်ခုမြေပေါ်လူကူးတံတားလုပ်ဖို့ကျန်ရှိနေသေးသော D-100 အကြားSütlüceရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အတူHalıcıoğluလန်းဆန်းHalıcıoğluထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ နယူးမြေပေါ်,3မသန်စွမ်းလူတို့အဘို့အမိန့်ရုပ်သိမ်းပြီဖြစ်ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ Metrobus ဘူတာရုံမှခရီးသည်များကိုပိုမိုအဆင်ပြေ access ကိုသစ်ကိုမြေပေါ်လူကူးတံတားစီမံကိန်းကိုထုတ်လုပ်စတင်ခဲ့ပြီးခံခဲ့ရသည်ပေးလိမ့်မည်သည့် E-5 လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ကျန်ရှိနေသောအကြားHalıcıoğluSütlüceရပ်ကွက်အတွင်း, နှင့်တကွ, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ဖြင့်ကြေညာချက်အရသိရသည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကိုသစ်ကိုမြေပေါ်လူကူးတံတားအကြောင်းကိုပေးတျောမူ၏ "Beyoğlu / နို့တိုက်ကျွေးရေးနှင့်Halıcıoğluရပ်ကွက်အတွင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ခြေလျင်ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်။ 1 လအတွင်းသစ်ကိုမြေပေါ်လူကူး Metrobus ဘူတာရုံများအတွက်ပြီးစီးရန်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
Metrobus Metrobus ဘဝတွေကိုယူ ... လမ်းပေါ် နေ. ... Metrobus, Metrobus အမျှလိုပဲဒီ Metrobus ဘာလဲ 30 / 07 / 2012 Metrobus ချ, Metrobus လမ်းတက် နေ. ... ... Metrobus Metrobus Metrobus နိုင်ပါတယ်ယူ ... ဆိုဤကဲ့သို့သော Metrobus Metrobus အလုပ် ... ဒီကဘာလဲ? ကြောင်းရှည်လျားဘတ်စ်ကားဤအမည်ဖြင့်စွန့်တော်မူ၏ Sahin,? သင်သည်ထိုနာမတျော၏ပုံပြင်ကိုကျွန်မထင်သည့်ဘာသာစကား, ထဲကကျရောက်သိလိုပါလျှင်ငါမဟုတ်, အကျိုးအတွက် Metrobus အမှားမှပေမယ့်ကျနော်တို့မကြာသေးမီနှစ်များတွင်မကြာခဏကြားသိ ... ယနေ့ကြောင့်နာမတျော၏ပုံပြင်ကိုရေးရန်ချင်တယ်။ *** ကိုယ်စားပိတ်ပင်တားဆီးမှု Pop-up တွင်, Facebook ပေါ်မှာစာမကျြနှာရှိပါတယ်, Limoni, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, နီးပါး uneventful နေ့ကအတိုင်းထက်အလွန်, အဘိဓါန်တွင် Metrobus ... *** အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်အတွင်းပိုင်းစိတ်ကူးယဉ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းပုံပြင်များမျိုးဖော်ပြထားလူတွေရဲ့စျေးပေါသက်သာအတွက်ခရီးသွားသေချာကြောင်း Metrobus ၏အမည်ကနေလာရန်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သလဲ ...
လူကူး Metrobus ဝင်တိုက်ခဲ့သည်:7ဒဏ်ရာရ 16 / 06 / 2012 ရုတ်တရက် Mecidiyekoy Metrobus အတွက်လမ်းထိမှန်သူတစ်ဦး။ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Metrobus ခရီးသည်, ဖြောင့်အရပ်မှကိုင်ပြီးဘယ်ဘက်ကိုကျဆင်းခဲ့သည်။7လူများမတော်တဆမှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Zincirlikuyu-မုဆိုး Metrobus 34 သင်္ဘောသမီးကညာကိုခရီးစေသည်, Mecidiyeköyလမ်းကနေအတိုအကွာအဝေးကိုရပ်တန့်ရုတ်တရက်ချစ်ခင်ရပါသောအဲလစ် (26) ကလူထိမှန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခုန်တက်။ Metrobus လမ်းခေါင်းကိုသည်ကားရှေ့မှနျသပိတ်မှောက်ခဲ့ပြီးနောက်လူပေါင်းချွတ်လွအလေးအနက်ထားဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Metrobus ကြောင့်ရုတ်တရက်ဘရိတ်များ၏သက်ရောက်မှုမှဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသည်။ လက်ဝဲမှလက်ျာဘက်ဒဏ်ရာရရှိသူအချို့ခရီးသည်များရပ်နေသူကအများအပြားသောနေရာများနေပြီ။ အများအပြားလူနာတင်၏အသိပေးစာနှင့်အတူအခင်းဖြစ်ပွားရာအပေါ် Metrobus ခရီးသည်နှင့်ယာဉ်မောင်းကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလူနာတင်ယာဉ်အချိန်တိုအတွင်းအခင်းဖြစ်ပွားရာသို့ရောက်ရှိ ...
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးအင်ဂျင်စက်ရုံ: 'ငွေအင်ဂျင်' '
Halıcıoğluအတွက် Metrobus မတော်တဆမှု,2ကလူဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်
ယင်းမှ-do နယူးလူကူးမျဉ်းကြားဖို့Halıcıoğlu Metrobus ဘူတာ
Metrobus Metrobus ဘဝတွေကိုယူ ... လမ်းပေါ် နေ. ... Metrobus, Metrobus အမျှလိုပဲဒီ Metrobus ဘာလဲ
လူကူး Metrobus ဝင်တိုက်ခဲ့သည်:7ဒဏ်ရာရ
Metrobus သည့်အတားအဆီးဆန့်ကျင်ပျက်ကျခဲ့: သေပြီ 1,3(ဗီဒီယို) ဦးဒဏ်ရာရ
အဆိုပါ6ခုနှစ်တွင် Bosphorus တံတားကားတစ်စီး Metrobus ဝင်တိုက်ခဲ့သည်ဒဏ်ရာရ
1 ရထားအလင်းကုန်ကား Aydin အတွက်ဖြတ်ကျော်ခဲ့ကြသည်ဒဏ်ရာရ
ရထား Aydin ဦးဒဏ်ရာရသည့်လယ်ထွန်စက် 1 ကူးခဲ့
Metrobus ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အရပ်သို့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်Gökçek'ten Telereferik နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကပြောကြားသည်။